Crazeandroider's Blog | Just another WordPress.com weblog
၁။စာရေးဆရာ၏မှတ်စု (စင်္ကာပူ ၂၀၀၉) (ဂျူး)
၂။ဘ၀နှင့်စာပေ (မော်လမြိုင်) (ဂျူး)
၃။စာရေးဆရာတစ်ယောက်၏ မှတ်စုများ (မြင်းခြံ) (ဂျူး)
၄။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ (တောင်ငူ) (ဂျူး)
၅။အနုပညာဖန်တီးသူနှင့် အနုပညာ ခံစားသူ (စင်္ကာပူ) (ချစ်ဦးညို)
၆။သို့ ကျောက်ပန်းတောင်း (ကျောက်ပန်းတောင်) (ချစ်ဦးညို)
၇။ကျွန်တော် ခံစားမိသလို ပြောဆိုပါမည်-၂ (မြောင်းတကာ) (ချစ်ဦးညို)
၈။သို့ မော်လမြိုင်၊ မှ ချစ်ဦးညို (ချစ်ဦးညို)
၉။ကျွန်တော်ခံစားမိသလို ပြောဆိုပါမည် (မြင်းခြံ) ချစ်ဦးညို
၁၀။သို့ အုန်းနှဲ၊ မှ ချစ်ဦးညို (ချစ်ဦးညို)
၁၁။သို့ တောင်ငူမှ ချစ်ဦးညို (တောင်ငူ) (ချစ်ဦးညို)
၁၂။ဇရပ်ကုန်းအတွက် စာပေလက်ဆောင် (မြောင်) (ချစ်ဦးညို)
၁၃။အနုပညာဖန်တီးသူနှင့် အနုပညာ ခံစားသူ (အသုတ်) (ချစ်ဦးညို)
၁၄။နည်းပညာ (ရွှေည၀ါ) (ချစ်ဦးညို)
၁၅။အဘိဓမ္မာမှ ပေးသော ဘ၀အမြင် (ရွှေည၀ါ) (ဒေါင်တာမင်းတင်မွန်)
၁၆။တန်ဖိုးရှိတဲ့လူ (မော်လမြိုင်) (အတ္တကျော်)
၁၇။အမွေ (YMCA) (အောင်သင်း)
၁၉။လက်ခံလိုက်စမ်းပါ (စာပေလောက) (အောင်သင်း)
၂၁။ပညာ (မုံရွာ) (အောင်သင်း)
၂၂။ယနေ့လူငယ်နှင့် ယနေ့ရသစာပေ( မကွေး) (အောင်သင်း)
၂၃။ဆရာအောင်သင်း -ပညာ (မုံရွာ)
၂၄။ယနေ့လူငယ် အောင်မြင်မှု (ပျော်ဖွယ်) (ဆရာအောင်သင်း)
၂၅။စာဖတ်ပါ။ တွေးပါ (ကျောက်ပန်းတောင်း) (ကောင်းသန့်)
၂၆။စာပေးရေးရာ (မြောင်းတကာ) (ကောင်းသန့်)
၂၇။စာပေရေးရာ (မော်လမြိုင်) (ခင်ခင်ထူး)
၂၈။အညာဓလေ့ ရွာဓလေ့ (တောင်ငူ) (ခင်ခင်ထူး)
၂၉။ဘ၀မရှုံးသူများ (ရှိုင်းဟုတ်) (မောင်စိန်ထွေး)
၃၀။သုတရသစာပေ (ကျောက်ပန်းတောင်း) (မောင်စိန်ဝင်း-ပုတီးကုန်း)
၃၁။ရသစာပေ (စင်္ကာပူ ၂၀၁၀) (မောင်စိန်ဝင်း-ပုတီးကုန်း)
၃၂။သုတရသစာပေ (မင်္ဂလာဒုံ) (မောင်စိန်ဝင်း-ပုတီးကုန်း)
၃၃။သုတရသစာပေ (မြောင်) (မောင်စိန်ဝင်း-ပုတီးကုန်း)
၃၄။ရသစာပေ (အသုတ်) (မောင်စိန်ဝင်း- ပုတီးကုန်း)
၃၅။ဘ၀မှစာ၊ စာမှ ဘ၀ (ကျောက်ပန်းတောင်း) လယ်တွင်းသား စောချစ်
၃၆။ဘ၀မှစာ၊ စာမှဘ၀ (တောင်ငူ) (လယ်တွင်းသားစောချစ်)
၃၇။ဘ၀မှစာ၊ စာမှဘ၀ (မင်္ဂလာဒုံ) (လယ်တွင်းသားစောချစ်)
၄၀။စာပေနှင့် ဘ၀အောင်မြင်ရေး (လယ်တွင်းသားစောချစ်)
၄၃။ရယ်စရာ မောစရာ (ကနောင် ၂၀၁၀) (မောင်သာချို)
၄၄။နှလုံးသားကို အလှဆင်ပါ (မြောင်းတကာ) (မောင်သာချို)
၄၅။နှလုံးသားကို အလှဆင်ပါ (မော်လမြိုင်) (မောင်သာချို)
၄၆။နှလုံးသားကို အလှဆင်ပါ (မော်လမြိုင်) (မောင်သာချို)
၄၇။နှလုံးလှပါစေ (အောင်လံ ၂၀၁၀) (မောင်သာချို)
၄၈။ဘ၀အလှအတွက် စာအလှများ (ကျောက်ပန်းတောင်း) (မောင်သာချို)
၄၉။စာအလှမှ ရွာအလှသို့ (တောင်ငူ) (မောင်သာချို)
၅၂။ကနောင်အလွမ်း၊ ထူးဆန်းထွေလာ မြေကမ္ဘာ (ကနောင်) အောင်ကျော်ဆန်း
၅၃။ရေးသူ၏ ပရိယာယ်၊ ဖတ်သူ၏ခံစားမှု (ရှိုင်းဟုတ်) (အောင်ပြည့်)
၅၄။လူနှင့် ပညာ (ဟင်္သာတ) (အောင်သင်း)
၅၅။လူနှင့်ပညာ (ဟင်္သာတ) (အောင်သင်း)
၅၆။လူငယ်တွေနဲ့ အနာဂတ် (ကျောက်ပန်းတောင်း) အောင်သင်း
၅၇။ဆရာအောင်သင်း- စာပေထဲက လူငယ်သမိုင်း (၁)
၅၈။ဆရာအောင်သင်း – စာပေထဲက လူငယ်သမိုင်း (၂)
၅၉။ဆရာအောင်သင်း -စာပေထဲက လူငယ်သမိုင်း (၃)
၆၀။ဒီနေ့လူငယ်တွေ (မြန်အောင်)( ဆရာအောင်သင်း)
၆၁။ဒီနေ့လူငယ်တွေ (မြန်အောင်) (ဆရာအောင်သင်း)
၆၃။ဗမာတွေ ပျော်ကြပါစေ (ကနောင် ) (အော်ပီကျယ်)
၆၄။ဗမာတွေ ပျော်ကြပါစေ (စင်္ကာပူ ၂၀၁၀) (အော်ပီကျယ်)
၆၅။အသိပညာဖြင့် မောင်းနှင်သော (အော်ပီကျယ်)
၆၆။အသိပညာဖြင့် မောင်းနှင်သော (အောင်လံ) (အော်ပီကျယ်)
၆၇။အသိပညာဖြင့် မောင်းနှင်သော (မော်လမြိုင်) (အော်ပီကျယ်)
၆၈။ပျော်ရာမှမနေရ၊ တော်ရာမှာ နေရ (UAE) (အော်ပီကျယ်)
၆၉။ဘ၀အရေးနှင့် ကာတွန်းအတွေး (အသုတ်) (အော်ပီကျယ်)
၇၀။လူသစ် စိတ်သစ် (အုန်းနဲ) ချစ်နိုင် (စိတ်ပညာ)
၇၁။စကားလက်ဆောင် (ရှိုင်းဟုတ်) ချစ်နိုင် (စိတ်ပညာ)
၇၂။စိတ်ဓါတ်ပြုပြင် ပြောင်းလဲမြှင့်တင်ရေး (ဒေါက်တာခင်မောင်ညို)
၇၃။လူတိုင်းအတွက် အသုံးချ စိတ်ပညာ (ရှိုင်းဟုတ် ) (ဒေါက်တာကျော်စိန်)
၇၄။ဟန်ချက်ညီ စိတ်ထား (ရှိုင်းဟုတ်) (ဒေါက်တာသိန်းလွင်)
၇၅။ရယ်စရာ မောင်စရာ (ရှိုင်းဟုတ်) (အီကြာကွေး)
၇၆။အသိပညာဖြင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရမည့် ဤကမ္ဘာ (ဟိန်းလတ်)
၇၇။ဆဒ္ဒန်ဆင်မင်းဇာတ်မှ လူ့သဘာဝ (မော်လမြိုင်) လှထွန်း (မြန်မာစာ)
၇၈။စိတ်ပညာနှင့် ယဉ်ကျေးမှု (ရှိုင်းဟုတ်) သိပ္ပံမှူးတင်
၇၉။အမွေခံထိုက်စေ (မော်လမြိုင်) (ကိုတာ)
၈၀။ပုံပြင်များ (မော်လမြိုင်) ကျော်ရင်မြင့် (ဖေလင်းသစ်)
၈၁။လမ်းပေါ်မှာ (တောင်ငူ) ကျော်ရင်မြင့် (ဖေလင်းသစ်)
၈၂။ဘ၀အောင်မြင်ရေး (မောင်လမြိုင်) ကြည်မင်း (ကျော်စောမင်း)
၈၃။ဗျူတီပါလာ နှင့် မဟော်သဓာ (ရှိုင်းဟုတ်) ကြည်မင်း (ကျော်ဇောမင်း)
၈၄။သန့်စင်လှပ အိမ်ရှင်မ (လဲ့လဲ့တင်)
၈၅။အမျိုးသားရေး တေးဂီတ (၂၀၀၉) (မာမာအေး)
၈၆။စာဖတ်ခြင်း အနုပညာ (မေးငြိမ်း)
၈၇။ကျန်းမာရေး (ရှိုင်းဟုတ်) (မောင်မောင်လှိုင်-အပ်စိုက်ကု)
၈၈။မိခင်ဖြစ်လာမည့် အပျိုစင်များ (ရှိုင်းဟုတ်) (မြမြလှိုင်)
၈၉။တစ်ခါသုံး လူ့အဖွဲ့အစည်း (စင်္ကာပူ) (နေ၀င်မြင့်)
၉၀။စာပေရေးရာ (မောင်လမြိုင်) (နေ၀င်းမြင့်)
၉၁။ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်က (အောင်လံ) (နေ၀င်းမြင့်)
၉၂။ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်က (တောင်ငူ) (နေ၀င်းမြင့်)
၉၃။ကျွန်မနှင့် စာဖတ်ခြင်း ၊စာရေးခြင်း (ကျောက်ပန်းတောင်း )(နုနုရည် -အင်းဝ)
၉၄။ကျွန်မဖတ်တဲ့စာ၊ ကျွန်မ ရေးတဲ့စာ (တောင်ငူ) (နုနုရည်-အင်းဝ)
၉၅။ရသစာပေ (အသုတ်) (နုနုရည်-အင်းဝ)
၉၆။စာပေနှင့် ဘ၀ နုနုရည် (အင်းဝ)
၉၇။စာရေးသူမှ စာဖတ်သူသို့ (ကျောက်ပန်းတောင်း) (နွမ်ဂျာသိုင်း)
၉၈။စကားလုံးများဖြင့် ကကုန်ခြင်း (ငြိမ်းမင်း)
၉၉။မြန်မာ့အသံ ရွှေပြည် (ဦးဘတင်)
၁၀၀။မျက်ကြည်လွှာ (မင်္ဂလာဒုံ) (သန်းမြင့်အောင်)
၁၀၁။မသိမသာ (စစ်ကိုင်း)( ဦးဘုန်း -ဓါတု)
၁၀၂။ခေါင်းလောင်းသံ (မော်လမြိုင်) (ဦးဘုန်း-ဓါတု)
၁၀၃။အိမ် (မြင်းခြံ) (ဦးဘုန်း-ဓါတု)
၁၀၄။အဖိုးပြောသောပုံပြင်များ (မြောင်) ( ဦးဘုန်း-ဓါတု)
၁၀၅။သရက်စေ့ (မြောင်) ( ဦးဘုန်း-ဓါတု)
၁၀၇။စာပေနှင့် အနုပညာ (၀င်းဖေ)
၁၀၈။စွန့်ဦးတီထွင် (ရှိုင်းဟုတ်) (ရဲမြင့်-စွန့်ဦးတီထွင်)
၁၁၀။အကြည်တော် – လမင်းဖမ်းပွဲ
၁၁၁။အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောဂါ (ရှိုင်းဟုတ်) (ဒေါက်တာ ကေသီလွင်)
၁၁၂။ကြက်၊ ငှက်တုတ်ကွေးရောဂါ (ရှိုင်းဟုတ်) (ဒေါက်တာ ခင်မောင်လွင်)
၁၁၃။သွေးဆုံးတာနဲ့ အိုရောလား (ရှိုင်းဟုတ်) (ဒေါက်တာ ကျော်ညွန့်)
၁၁၄။သင့်အရေပြားကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ (ဒေါက်တာ မြင့်မြင့်ကြည်)
၁၁၅။ကုရာနတ္တိ (ရှိုင်းဟုတ်) (ဒေါင်တာတင့်လွင်)
၁၁၆။ဗုဒ္ဓပညာ (ရွှေည၀ါ) (နန္ဒာသိန်းဇံ)
၁၁၇။အမေစားသော ထမင်းတစ်နပ် (ဦးသုခ)
၁၁၈။စာရေးဆရာအသင်း မော်လမြိုင် (ကောင်းသန့်)
၁၁၉။စာရေးဆရာအသင်း မော်လမြိုင် (ကျော်ဝင်း)
၁၂၀။စာရေးဆရာအသင်း မော်လမြိုင် (လင်းသိုက်ညွန့် (မြန်မာ့မြေ))
၁၂၁။စာရေးဆရာအသင်း မော်လမြိုင် (မသီတာ (စမ်းချောင်း))
၁၂၂။စာရေးဆရာအသင်း မော်လမြိုင် (ကိုကိုကြီး)
၁၂၃။စာရေးဆရာအသင်း မော်လမြိုင် (ဇာဂနာ)
၁၂၄။စာရေးဆရာအသင်း မော်လမြိုင် (ရဲသျှမ်း)
၁၂၅။စာရေးဆရာအသင်း မော်လမြိုင် (မင်းချမ်းမွန်)
၁၂၆။စာရေးဆရာအသင်း မော်လမြိုင် (အဏ္ဏ၀ါစိုးမိုး)
၁၂၇။စာရေးဆရာအသင်း မော်လမြိုင် (ဒေါ်စမ်းစမ်းနွဲ့ (သာယာဝတီ))
၁၂၈။စာရေးဆရာအသင်း မော်လမြိုင် (ကျော်ကျော်လှိုင်)
၁၂၉။စာရေးဆရာအသင်း မော်လမြိုင် (သန်းမြင့်အောင်)
၁၃၁။ချစ်ပြုံးနှင်းဆီ (ဦးဘုန်း- ဓာတု)
ဆုတောင်းခြင်း နှင့် သစ္စာဆိုခြင်း
ငယ်ငယ် တုန်းက ကျောင်းမှာ သင် ရတဲ့ သုဝနသာမ(စာလုံးပေါင်း သည်းခံ) ထဲမှာဆိုရင် မင်းသားရဲ့ မိခင် (နာမည်မသိ) က သစ္စာဆိုလို့ လိုရာ ဆုတွေ ပြည့်တယ် ဆိုတာ ကို ဖတ်ခဲ့ဖူးပါတယ် ။
အဲလိုပဲ အမေကလည်း သစ္စာဆို ရင် လိုချင်တာဖြစ်တယ် လို့ ပြောခဲ့ ဖူးပါတယ် ။
သူ့ ငယ်ငယ်တုန်းက ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ရပ်တွေ ကို ပြန်ပြန်ပြောပြ ပြီး “အဲလို သစ္စာ ဆိုလိုက်တာ သားရေ..ဘယ်လိုဘယ်လို သားရေ… အဲလိုနဲ့ ပြည့်ရော ” လို့ ခနခန ပြောပါတယ်။
ဥပမာတစ်ခု ပြောရရင်ကျွန်တော် အသက်သုံးနှစ် ငယ်ငယ် တုန်းက ဧရာဝတီ မြစ်ထဲ ကို ဇက်နဲ့ ဖြတ်ကူးတုန်း မုန်တိုင်း ကျတာ ခံရဖူးပါတယ်။ (အဲတုန်းက ဇက်ဆိုတာ ရှေ့ မှာ ပဲထောင် လိုလို လှေလိုလို ဟာက ဆွဲပြီး နောက်က ဖောင် ပါတာလေ နွားလှည်းလိုပဲ ရှေ့ က လှေ နှစ်စီး နောက်က ဖောင်တစ်ခု ဖောင်ပေါ်မှာ လူတွေရော ကားတွေ့ ရော ပါတယ်) မြစ်ထဲမှာ ဆိုတော့ မိုးကလည်း သည်းကြီးမဲကြီး ရွာ.. ဇက်မောင်းတဲ့သူလည်း ရှေ့ ကို သဲသဲ ကွဲ ကွဲ မမြင်ရဘူးလေ။ အဲလိုနဲ့ စမ်းတဝါးဝါး နဲ့ မောင်းရင်း လမ်းပျောက်နေတယ် ဆိုပါတော့ ဗျာ….
အဲ….. အဲမှာ အမေက သစ္စာ ဆိုလိုက်တာ ကျွန်တော် တို့ ကမ်းကိုတွေ့သွားတယ် ဆိုပါတော့ဗျာ။ (တိုက်ဆိုင်တာလည်း ဖြစ်ချင် ဖြစ်မှာပေါ့)
အမေက အဲဒါတွေ ပြန်ပြောရင်း သားလည်းလိုချင်တာ ရှိရင် အဲလို သစ္စာဆို ပြီး ဆုတောင်း ရင် ပြည့်တယ် ဆို ပြီး ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော် မှတ်မိသလောက် ၅ တန်းကနေစပြီး ၁၀ တန်းလောက်အထိ သစ္စာလည်း ဆို ဘုရားမှာလည်း ဆုတောင်း အခွင့်ကြုံရင် ကြုံ သလို လုပ်ပါတယ်။ ရွှေတိဂုံဘုရား ရောက်လည်း ဆိုတောင်းပါတယ် ။ ဘယ်ဘုရားရောက်ရောက်ဆုတောင်းပြည့် စေတီ ပါတာနဲ့ ဆုတောင်း ပါတယ်။ စိတ်ပုတီးတောင် တစ်ရက်ကို ၁၀ ပတ်နဲ့ ၁နှစ် နီးပါ စိတ်ပြီး ဆုတောင်းပါတယ် ။ “အရှင် ဘုရား တပြည့်တော် Nitendo ဂိမ်းစက်ရလို ပါ၏ ” ဆိုပြီးတော့ လေ။ ၅ နှစ်လောက်တောင်းလာ လိုက်တာ မပြည့်ပါဘူး ဗျာ။ အဲ့ ထဲ က စပြီး ဆုတောင်းတာ ရော သစ္စာဆိုတာရော အယုံအကြည် မရှိတော့ဘူး ။ အမေ့အတွက်တော့ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့ ။ ကျွန်တော်က တော့ ဘာမှ လည်း ဟုတ်တဲ့ကောင် မဟုတ်တော့ ဘာမှလည်း ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး လေဆိုတာပဲ ။ ကောင်းမှု ကုသိုလ် များများ စားစား လုပ်တဲ့ သူလည်း မဟုတ်တော့ လိုတိုင်း တရမယ် မထင်တော့ဘူး ။ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတစ်ချို့ ဂုဏ်တော် ကိုးပါး (လို့ထင်တာပဲ) ပုတီးတွေ ဘာတွေ စိတ်တာတွေ ရှိပါတယ်။ ပြီးရင် ဆုတစ်ခုတောင်း ပြည့်တယ် ဆိုပဲ။ ကျွန်တော်တော့ မယုံပေါင်။ တစ်ယောက်ဆို ဂိမ်းဆော့ဖို့ သွားခေါ်တာ ၁၅ မိနစ်စောင့် ဆိုလို သူစိတ်ပုတီးစိတ်တာ ထိုင်စောင့် နေခဲ့ရဖူးတယ်။ သူ့ဆုတောင်းလည်း ပြည့်ခဲ့ပုံ မရပါဘူး)
ကိုယ်လိုချင်ရင် ရအောင် ကိုယ့်ဖာသာ ကို လုပ်ရမယ် ဆိုတဲ့ အသိစိတ်က ဝင်လာတာပေါ့ဗျာ။ လူကြီးတွေ ကို ကန်တော့ လို့ သူတို့ ဆုပေးရင် လည်း ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေဆိုတာ ဝတ်ကျေတန်းကျေ သဘောမျိုးပြောတာပါ။ သူတို့ပေးတိုင်းလည်း ပြည့်မယ် မထင်…။
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်လိုချင်ရင် ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် လုပ်ယူမှ ရမယ်။ ဘုရား ဆိုတာ ဆုတောင်းဖို့ မဟုတ်ဘူး။
ဒီနေ့ ရုံး ကလူတွေနဲ့ ထမင်းစားတော့ ဘာသာရေး အကြောင်းပြော ဖြစ်တာကနေ အတွေးအခေါ် ပိုင်းဆိုင်ရာ အတွေးအခေါ်တွေ ပြောဖြစ်တယ် ။ စိတ်ဝင်စားစရာက လူတစ်ယောက်ကို ချစ်တယ် မုန်းတယ် ဆိုတာ အဲလူကို ချစ်တာ မုန်းတာ မဟုတ်ပဲ နဲ့ အဲလူ လုပ်တဲ့ အပြု အမူတွေ Event တွေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခံစားချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပဲ
ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်တာပဲလေ…. ဘုရားဟောသလို လူဆိုတာ thing ပဲလေ။ အရာဝတ္ထုပဲ အဲဒါကို မုန်းလို့ ချစ်လို့ မရဘူး လေ။ ဥပမာ သင်ကျောက်တုံး တစ်တုန်းကို ချစ်လို့ ရလား။ အယ် ကျောက်တုန်းလေးက ချစ်စရာလေး ဆိုပြီး ချစ်မလား ဘယ် ချစ်မလဲ ( ချစ်တဲ့သူရှိချင်လည်း ရှိမှာပေါ့ ) လူလည်း အဲလိုပဲ လူတစ်ယောက် ကို ချစ်တယ် ဆိုတာ လည်း အဲလူရဲ့ အပြု အမူတွေ ကို ချစ်တာ။ အဲလူကို ချစ်တာမဟုတ်ဘူး ။ မယုံ ရင် ခင်ဗျားချစ်တဲ့ သူတစ်ယောက် ရဲ့ စိတ်နေသဘောထားကို ခင်ဗျားမုန်းတဲ့ သူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်နေသဘောထားမျိုး ပြောင်းထည့် ကြည့် ပါလား။ ခင်ဗျားစိတ်ထဲ ချစ်နိုင် မလား မုန်းသွား မလား ကြည့် ကြည့်ရအောင်…။
မတူညီတဲ့ ဘဝ နှစ်ခု (၁)
တစ်ခါတစ်လေ တော့လည်း မတူညီတဲ့ ဘဝနှစ်ခု ပေါင်းစည်း ဖို့ဆိုတာ အခက်သား နော်……
မတူညီတဲ့ အတိတ်နှစ်ခု ဟာ တူညီတော့မယ့် အနာဂတ်တစ်ခု အတွက်ကို ငြင်းကြခုန်ကြ ကတောက်ကဆဖြစ်ကြနဲ့…..
ကျွန်တော်က တော့ငယ်ငယ်ကတည်းက အဖိုး အဖွားနဲ့ အတူနေလာတာဆို တော့ သူတို့ ရဲ့ သွန်သင်ဆုံးမမှုတွေ အောက်မှာ အဖိုးတွေးသလို အဖွားစဉ်းစား သလိုပဲ အရာရာကိုစဉ်းစား မိနေတတ်တယ်
အဖေနဲ့ နေတာ များရင်တော့ အဖေ တွေးသလိုစဉ်းစားသလို ဖြစ်သွားမလား ပဲ…။ အခု တော့ အဖိုး အဖွားတွေ လိုသာတွေးနေစဉ်းစားနေတတ်တော့တယ်
အဖွား က ငွေဆိုတာ ကို မကုန်သင့်မကုန်ရအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး အရိုးရှင်းဆုံး နေတတ်အောင် ဘဝကို ရိုက်သွင်းထားခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့် အဒေါ်တွေ ဦးလေး တွေ လည်း သူတွေး သလိုမျိုး ဘဝကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ နေလာတတ်ကြတယ်။
ကျွန်တော် အမေဆိုလည်း အဲလိုပဲ။ ပါတိတ်ဝမ်းဆက်တွေ ရှိတာတောင် မှ အကျီ င်္ သပ်သပ် ထမီသပ်သပ် ဝတ်တတ်တဲ့ သူ ၊ သူများ တွေ မျက်လုံး ထဲမှာ သူလိုကိုယ်လို ပဲ ဖြစ်အောင် ရိုးရိုးအေးအေးပဲ နေတတ်တယ်။
ကျွန်တော့်ချစ်သူ မက တော့အဲလိုမဟုတ်ပါဘူး ။ ငယ်ငယ် ကတည်းက အဖေ အမေနဲ့ နေလာခဲ့ရတော့ သူတို့ ရဲ့ ချစ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရမှာ ပေါ့ ။ သူအမေနဲ့ စကားပြောရင် ချွဲတာ နွဲ့တာ ကိုလည်း မကြားချင်မှ အဆုံး ပါ ။ အစကတော့ နည်းနည်း အမြင်ကတ်တာပေါ့ဗျာ
ကျွန်တော့်တုန်း က ချွဲလည်း မချွဲခဲ့ရဘူး အနွံတာလည်း ဘယ်သူမှ မခံကြဘူးလေ ။ ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ ကောင်ကလည်း ကိုယ်မလုပ်တာကို သူများကို မလုပ်စေချင်ဘူး ။အဲ့တာ အကြီးမား ဆုံး ပြသနာပဲ။
မ က ငယ်ငယ် ကတည်းက သူလိုချင်တာ ကို သူ့အမေတွေအဖေတွေက ပေးကြတယ် လေ အဲတော့ လိုချင်တာ မရရင် ငိုတတ်လာတယ် စိတ်ကောက်တတ်လာတယ် စိတ်ဆိုးတတ်လာတယ်
ကျွန်တော်က တော့ ငယ်ငယ် ကတည်း က လိုချင် တွေ တာ မရခဲ့ဘူးလေ ။ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းက ဆိုရင် အဝတ်အစား အသစ်ဆိုတာ မရှိသလောက်ပဲ ။ ဦးလေး နဲ့ မတန်တာတွေ သူက မဝယ်ဖြစ်လို့ ပေးတဲ့ဟာတွေ ပဲ ဝတ်လာရတာပါ ။ ကျွန်တော် ငယ်ငယ်တုန်းက ဆို အရုတ်တွေ ဘာတွေလည်း မရှိ ဘူး ။ အဖေ ဝယ်ပေးတဲ့ သံစုံမြည်တဲ့ ဓါတ်ခဲ သေနတ်တစ်ခု ပဲ ရှိပါတယ် ။ ဦးလေး က အတန်းထဲမှာ ဆုရလို့ မုန့်ဖိုးပေးတဲ့ ၅၀၀၀ တောင်မှာ မသုံး ဖြစ်ခဲ့ပဲ အဖေရဲ့ အကူအညီနဲ့ ဘဏ်မှာ အကောင့်ဖွင့် ပြီး စုခဲ့တဲ့သူမျိုးပါ ။ ပူု ဆာတိုင်း မရခဲ့တဲ့ အတွက် ပူလည်း မပူဆာတတ်တော့ ဘူး ။ အဲတော့ တစ်ခုခု လိုချင်တာ ရှိရင်လည်း အရင်ဆုံးစဉ်းစားတာက ဒါကြီး ငါ့မှာ မရှိရင်ကော ငါဘာဖြစ်သွားမှာလဲ ပေါ့။ ဘာမှ မဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ မလိုချင်တော့ဘူး လေ ။
မကတော့ အဲလိုမဟုတ်ဘူး အခု အသက်အရွယ် ရောက်နေတဲ့အထိ သူများ ဝယ်တာ မဝယ် နိုင်လို့ ငိုရတာနဲ့ သူများ ရတာ မရလို့ ဝမ်းနည်းရတာ နဲ့ သူလိုချင်တာ ပူဆာတာ ဝယ်မပေးနိုင်လို့ စိတ်ကောက်ရတာနဲ့ အခု ဒီစာရေးနေတုန်းတောင် လေသံမာမာနဲ့
good night ဆိုပြီးနှုတ်ဆက်သေးတယ် ။ သူက စိတ်သာဆိုးနေတာပါ ကျွန်နော့်ကိုတော့ ဂရုစိုက်ပါတယ် ။ အခုလည်း သူလိုချင်တာ မရလို့ စိတ်ဆိုးနေတယ်လေ ။
သူက ငယ်ငယ်ကတည်း က မွေးနေ့ပွဲတွေ လုပ် ကိတ်မုန့်တွေ လှီး ဖယောင်းတိုင်တွေ မှုတ်နဲ့ပေါ့ ။ ကျွန်တော် က တော့ ကိုယ့်မွေးနေ့တောင် ကိုယ်မမှတ်မိပါဘူး ။ ဆယ်တန်း form တင်တုန်းက တောင် ၂၈ ရက် ၇ လနဲ့ ၂၇ ရက် ၈ လ ဘယ်ဟာ က ကိုယ့်မွေးနေ့ မှန်း မသိခဲ့တဲ့ ကောင်ပါ ။ ကျွန်တော်သာ မက ကျွန်တော်တို့ အိမ်က မိသားစုတွေ အကုန်လုံး အဲ့လိုပဲ ပကာ သန ကို မမက်ကြဘူးလေ ။ အခုလည်း သူ့ မွေးနေ့မှာ ဝတ်ဖို့ ဂါဝန် အဖြူလေး ဦးထုပ် အဖြူလေး ဝယ် ပေးဖို့ ပြောတာ ကျွန်တော် က အဲလိုမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ ပြောတာကို စိတ်ကောက်နေလေရဲ့ ။ အော် မရယ် မတူညီခဲ့တဲ့ ဘဝ နှစ်ခု က လာတဲ့သူ တွေ ပဲ ကျွန်တော့်ကို မသနားဘူးလား ။ ကျွန်တော် အဲလိုမျိုး အယူအဆတွေကို မက နားမလည်ဘူးလား ။ နားတော့ လည်မယ်ထင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် လက်ခံ သဘောတူနိုင်ဖို့ ကတော့…………………..